Ka bogo RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Man City barbaraha kula gashay garoonkeeda Etihad kooxda Middlesbrough – Gool FM
(Manchester) 05 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa barbaro 1-1 la dhaafi waysay Middlesbrough oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo goordhow soo idlaaday.
Gool uu Man City u dhaliyey Sergio Aguero kaddib markii uu dhammaystiray karoos uu dadab ka soo qaaday 43’daqiiqo Kevin de Bruyne, waxaa ka barbareeyey qeybtii labaad ee ciyaarta xiddiga Middlesbrough ee Marten De Roon kaddib markii uu madax xoog leh ugu shubay City, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Man City oo sidaas labo dhibcood ku lumisay ayaa hal dhibic oo qura si ku meel gaar ah hoggaanka ugu qabatay horyaalka Premier League.
>- Man City ayaa ku guuldarreysatay inay shabaqeeda gool ka ilaashato 9 ka mid 11-kii kulan oo ay horyaalka Premier League ciyaartay iyadoo uu tababare u yahay Pep Guardiola.
>- Sergio Aguero ayaa gool ka dhaliyey 28 ka mid ah 30 kooxood oo kala duwan oo uu ku wajahay horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
>- Sergio Agüero ayaa sidoo kale dhaliyey goolkiisii 150-aad oo uu u dhaliyo kooxdiisa Manchester City 223 kulan oo uu u ciyaaray tartammada oo dhan.
>- Tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey bishii September sanadkii 2015, Kevin De Bruyne ayaa sameeyey 19 caawin gool tartammada oo dhan, waxaana uu lix ka badan yahay ciyaaryahan waliba oo ka tirsan kooxda Man City.